UNaya Rivera olahlekileyo, oCingelwa ukuba ubhubhile- Iindaba zaseNigeria kunye neStorie yeHlabathi
GI-lee star uNaya Rivera ulahlekile, kucingelwa ukuba ufile, iintolongo zase-US zinamazinga e-coronavirus ngaphezulu kunabantu ngokubanzi, ulibaziseko lwenkulumbuso kwi-ukudluliselwa komhla wewindows. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. Inkwenkwezi engu-Glee uNaya Rivera ulahlekile njengoko unyana esithi tsibela emlanjeni
Enye yeenkwenkwezi ezivela kuthotho lweedrama ye-TV yaseMelika,Glee', UNaya Rivera uthathwe njengofileyo emva kwesigameko sokungena esikhepheni. UNaya Rivera kuthiwa wayekuhambo lokuhamba ngeenqanawa kunye nonyana wakhe oneminyaka emi-4 kwichibi laseCalifornia apho umsitho wawusenzeka khona.
Imithombo yeendaba ixele ukuba unyana kaNaya Rivera, UJosey, wafunyanwa elele pontoon kwiLake Piru iiyure ezintathu emva kokuba umlingisi eqeshise inqanawa. Abasemagunyeni basakhangela inkwenkwezi yemuvi. Unyana kaRivera uxelele abasemagunyeni ukuba umama wakhe ugxothiwe emanzini kodwa akazange abuye.
Inkwenkwe yafunyanwa i-vest yobomi, kodwa i-Rivera yayinganxibi. Ngelixa isikhwama sakhe semali kunye nesipaji sakhe zafunyanwa esikhepheni. I-Rivera's Mercedes G-Wagon yafunyanwa kufutshane kwindawo yokupaka.
2. Abasebenzi bezempilo abangama-779 bavavanywa ukuba banayo i-COVID-19 yaseGhana
Malunga nabasebenzi bezempilo abangama-779 eGhana bafumana isifo se-coronavirus. Abayi-9 kubo baye, nangona kunjalo, benesifo, ngelixa inani elikhulu bebodwa belindele iziphumo zabo zovavanyo emva kokuchazwa kwentsholongwane kumgca wokusebenza.
Isiteyitimenti esidibeneyo samaphephandaba yiGhana Medical Association (GMA), iGejistri yabaBhali abaBhalisiweyo kunye nabaMi (GRNMA), Umbutho wabasebenzi beNkonzo yezeMpilo e-TUC Ghana (HSWU) kunye noRhulumente kunye noMbutho wooMama beZibhedlele (i-GHOSPA) ngoLwesine, nge-9 kaJulayi. Umgangatho wokosuleleka kwabasebenzi bezempilo yayingumbandela oxhalabisayo kuba oko kuchaphazela kakubi ukuhanjiswa kwezempilo kumaziko ohlukeneyo ezempilo kweli lizwe.
3. Ityala lokuvalwa kwecuba laseMzantsi Afrika libuyela kwinkundla kwiveki ezayo
Umbutho ozimeleyo wecuba u-Fair-Trade Independent Tobacco Association (FITA) uqinisekisile ukuba umngeni wabo wezomthetho wokufumana ukutshitshiswa kwecuba uzakubuyela kwinkundla kwiveki ezayo kaJulayi 15 emva kokuba ityala labo laqala ukugxothwa nge-26 kaJuni.
Eli qela aliphumelelanga kumzamo wabo wokubuyisa icuba kwisupermarket ekupheleni kwenyanga ephelileyo, xa inkundla ePitoli igwebe urhulumente, eqinisekisa ukuba ukuvalwa kwecuba kuya kuhlala kulindelwe kwangaphambili.
4. Ukufa kweCoronavirus kunye namazinga okusuleleka aphezulu kwiintolongo zase-US kunabantu ngokubanzi
Amabanjwa abanjwa ngenjongo yokwosulela omnye komnye intsholongwane.
Ubhubhani we-coronavirus unempembelelo ebalulekileyo kwinkqubo yentolongo yesizwe, obangela amazinga aphezulu osuleleko nokufa xa kuthelekiswa noluntu ngokubanzi. Abaphandi bathi iqondo losuleleko lwentolongo lalingama-3,251 ngabahlali abayi-100,000, ngelixa umyinge wabantu bebonke wawumalunga nama-587 amatyala ngabantu abayi-100,000.
UBrendan Saloner, unjingalwazi onxulumene naye kwiSebe lezeMigaqo-nkqubo yezeMpilo kunye noLawulo kwiSikolo saseBloomberg uthe ezinye iintolongo azichazi nkqu namatyala, kwaye okubi kakhulu, abanye abavavanyi amabanjwa. Njengoko ubhubhane uqhubekile, amagosa kulo lonke elase-US achonge iintolongo njengezona ndawo ziphambili zekona.
5. Isigqibo sokulibaziseka kwePremier League ngomhla wokugqibela wexesha lokudluliselwa kwehlobo
Iiklabhu zenze uhlengahlengiso olukhulu ukusukela kubhubhani we-coronavirus kubandakanya ukudlala ngaphandle kwabalandeli abakhoyo
Iiklabhu zePremier League ziye zalibazisa isigqibo malunga nemihla yokutshintshwa kwefestile yehlobo. I-UEFA ifuna ukuba iwindow ivalwe nge-5 ka-Okthobha, ngaphambi kokuqala kwe-Champions League yexesha elizayo. Kuyaqondwa ukuba iiklabhu zicinga ngokuba zingakwandisela iifestile iiveki ezimbalwa kuphela kwiiklabhu zeBhola ekhatywayo, ezichaphazeleke kakubi yi-COVID-19.
Isigqibo sokugqibela sinokuthathwa kwintlanganiso yePremier League ngoJulayi 24. Kucingelwa ukuba umhla wokuqala wesizini ka-2020 ukuya ku-21 uqinisekiswe kwintlanganiso elandelayo. Ukuqalisa isizini entsha ngoSeptemba 12 kuhlala kungoyinto enokwenzeka kodwa oku kuza kwangoko emva kwekhefu lomhlaba jikelele likaSeptemba.
Umbutho weBhola ekhatywayo kunye ne-EFL bayachaphazeleka linani elincitshisiweyo lemihla yomdlalo iya kuba nefuthe kukhuphiswano lwabo lwendebe.
I-Rave News Digest: UMayweather Ukuza Ukuthatha Umhlala-phantsi, Ukufa kweGlee Umlingisi, uBuhari uthi Akukho Kota yesiThathu + Okungakumbi
Uhlobo Rave Julayi 9, 2020